An-kitsim-po: raha hasiana fe-potoana ny tsenan’omby ? | NewsMada
Mampanahy ny hahalany tamingana ny omby raha mitohy izao asan-dahalo izao. Efa teto amintsika hatramin’izay ny halatr’omby, saingy mbola kolontsaina izy tamin’izany. Tsy nahazo vady izay tanora tsy mbola nangalatr’omby tany atsimo. Niova famonoan’olona feno habibiana anefa izany ankehitriny, noho ny vola. Fototra iray lehibe manampy izany ny tsy fananan’asa, indrindra ny faharatsian-dalana any ambanivohitra.
Taona maro izao, tsy fantatra firy na firy marina ny isan’ny omby eto Madagasikara ? Ny asan-dahalo anefa mahazao vahana hatrany. Ny morontsiraka koa midadasika. Koa vahaolana iray, ohatra, nahoana raha hasiana fe-potoana ny fivarotana any amin’ny tsenan’omby, toy ny trondro na drakaka, izay misy fotoana tsy azo jonoana. Ny trondro sy ny drakaka aza betsaka lavitra no ho ny omby.
Eto amintsika, noho ny kolikoly isan-karazany, betsaka ny “fanamboarana bokin’omby”. Betsaka, mba tsy ilazana tompon’andraikitra ny rehetra, tsy mahazo ny anjarany amin’ny “fanamboarana bokin’omby” izany. Efa tsara aloha ny fepetra noraisin’ny fanjakana ny amin’ny tsy fahazoana manondrana omby velona. Mila fanaraha-maso hentitra anefa izany, satria midadasika ny morontsiraka. Fepetra vaovao tokony horaisina ny fanakatonana ny tsenan’omby, izay vitsy dia vitsy raha oharina amin’ny trondro sy ny drakaka.